टीभी शो Archives - Page2of3- Purbeli News
English टीभी शो	प्रेमिकाको अमेरिका मोहले यसरी लियो ज्यान ? (हेर्नुहोस भिडियो सहित)	काठमाडौं । आफूले माया गरेको मान्छे गरिब छ उसँग गरिबी छ भनेर धनी केटा त्यसमा पनि अमेरिकन कार्ड होल्डर भेट्दैमा आफ्नो मायालार्इ लत्याएर अमेरिका जादा घटेको घटना हो यो ।
सोहि कथालार्इ सर्ट मुविको रुप दिएर प्रस्तुत गरेका छौं । शंकर अधिकारी घायलको लेखन/निर्देशनमा अग्रिम लामाको छायांकन, प्रेम शर्मा पौडेलको सम्पादन, भिमसेन अधिकारी, सुबि शाही र उत्तम अधिका...	श्रीमान् कतार उडेपछि श्रीमतीले राखिन् परपुरुषसँग यस्तो सम्बन्ध	काठमाडौँ । सुन्दर सपना देखेर परवास उड्ने कैयौँ नेपालीका सपनाहरु साकार भएका छैनन् । यही कुरालाई शंकर अधिकारी घायलको लेखनर निर्देशनमा तयार भएको भिडियोले देखाउन खोजेको छ ।
श्रीमानले बिदेशमा रगत पसिना बगाएको पाँच लाख लिएर श्रीमती अरु संगै भागे पछिको कथालाई भिडियोले उतारेको छ ।
किन रोए दिपक, दिपा र प्रियंका ? (हेर्नुहोस भिडियो)	काठमाडौ / देशभर प्रदर्शनमा आएको चलचित्र छक्का पञ्जालाई दर्शकले खुबै रुचाएका छन् । दर्शकको माया देखेर चलचित्रका निर्देशक र नायिकालाई रोएको खबर अहिले भाईरल बनेको छ । रिलिज भएको पहिलो दिन छक्का पञ्जा र चलचित्रको पूरै टीमको लागि निकै उत्साहजनक रह्यो । फिल्मको ब्यापारलाई हलिउड र बलिउड फिल्मले समेत असर पार्न सकेका छैनन् । काठमाण्डौको गोपीकृष्ण हलमा चलचित...	किन गरे माधवले एक युबतीको हत्या ? (भिडियो सहित)	काठमाडौं / एन एच एस मिडियाको प्रस्तुतीमा शंकर अधिकारी घायलको लेखन÷निर्देशनमा सर्ट मुवि रिलिज भएको छ सन्काले जलेको लन्का । आफ्नी बैनी आफनै श्रीमानसंग लागेको सन्का लागे पछि घटेको सत्य घट्नालार्इ सर्ट मुविको रुप दिइएको छ । माधव पण्डित पहिलो पटक सर्ट मुविमा प्रस्तुत भएका छ्न् ।
सुबि साही र उषा बस्नेतको अभिनय, रामकृष्ण चौलागाईंको छायांकन र अर्जुन थाप...	बुढा-बुढि बिचमा बोल्चाल बन्द भएपछि म्यासेजमै कुराकानी : रमाईलो भिडियो हेर्नुहोस्…	धुर्मुस-सुन्तलीद्वारा बनाइदै गरेको एकीकृत नमुना बस्तीमा पुग्दा जे देखियो (हेर्नुहोस भिडियो सहित)	काठमाडौँ / गिरान्चौर एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि कलाकारद्वय सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले थालेको सहयोग संकलन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्ममा चार करोड ७५ लाख रुपैयाँ जुटिसकेको र थप २५ लाख जुटेपछि सहयोग संकलन बन्द गर्ने धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
गिरान्चौर एकीकृत बस्तीको अनुमानित बजेट पाँच करोड हो । अहिले सहयोग...	बिदेशमा श्रीमानले दुख गरि पसिना बगाएर धन कमादै गर्दा यता श्रीमती भने अर्कै को माया मोज(हेर्नुहोस अतिनै मार्मिक भिडियो)	बिदेशमा श्रीमानले दुख गरि पसिना बगाएर धन कमादै गर्दा यता श्रीमती भने अर्कै को माया मोहमा फसेर आफ्नो घर परिवार भुलेर क्षडीक माया ले गर्दा के-के सम्म भोग्नु पर्यो ??| हेर्नुहोस अतिनै मार्मिक भिडियो
मनोज गजुरेलको व्यंग्य : नेपाली आकाशमै एयरपोर्ट (भिडियोसहित)	चर्चित कमेडीयन मनोज गजुरेलको पछिल्लो व्यंग्य सार्वजनिक भएको छ । समसामयीक घटनाक्रममा व्यंग्य गरीरहेका उनको पछिल्लो गजुरीयल विश्लेषण भिडियोमा सार्वजनिक भएको हो ।
उनले हवाई दुर्घटनाप्रति सरकार उदासीन रहेको भन्दै गतिलै व्यंग्य गरेका छन् । यस्तै, नक्कली डक्टरको पछिल्लो घटनाक्रमलाई पनि उनको व्यंग्यले छोएको छ । गजुरीयल भिडियोमा आकाशमै एयरपोर्ट बनाइएको ...	सलमान खानको फिल्म सुल्तान हलमा चल्नु अगावै अनलाइनमा लिक ( भिडीयाे सहित )	बलिउड सुपरस्टार सफमान खानद्वारा अभिनित फिल्म सुल्तान रिलिज हुनु अघावै अनलाइनमा लिक भएपछि निर्माण कम्पनी यस राज फिल्मस तनावग्रस्त बनेकाे छ । फिल्म रिलिज हुनु १८ घण्टा अघिनै अनलाइनमा लिक भएपछि निर्माण कम्पनीकाे कराेडाै लगानी डुब्ने खतरा बढेकाे भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएकाे छ । उक्त फिल्म २ घण्टा ३६ मिनेटकाे रहेकाे छ । सलमान र अनुष्का शर्मा द्वारा सुल...	एनजीओ/आइएनजीओले यसरी नेपाललाई पार्दै छ ? (भिडियाे सहित)	आइएनजिओ/एनजिओ रुपी धमिराले देश कसरी सखाप पार्यो भन्ने सौरभको विश्लेषण हेर्नुहाेस याे भिडियाे ।